IVietnam iphinda ivule isiqithi sasePhu Quoc ukuba sigonywe ngokupheleleyo kubakhenkethi bangaphandle
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziVuthayo zaseVietnam » IVietnam iphinda ivule isiqithi sasePhu Quoc ukuba sigonywe ngokupheleleyo kubakhenkethi bangaphandle
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Shopping • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziVuthayo zaseVietnam
IVietnam iphinda ivule isiqithi sasePhu Quoc ukuba sigonywe ngokupheleleyo kubakhenkethi bangaphandle.
Bonke abasebenzi abasebenza kwizibonelelo zenkonzo zesiqithi kunye ne-99% yabahlali abadala basePhu Quoc bagonyelwe ngokupheleleyo intsholongwane ye-COVID-19.
Isiqithi seholide saseVietnam Phu Quoc bamkele ngaphezu kwama-200 abakhenkethi abagonywe ngokupheleleyo abasuka eMzantsi Korea namhlanje.
Iindwendwe zaseSouth Korea ngabakhenkethi bokuqala bangaphandle ukuya eVietnam ukusukela oko ilizwe lavala imida yalo phantse kwiminyaka emibini eyadlulayo ukunqanda ukusasazeka kosulelo lwe-coronavirus.
Vietnam yavala imida yayo ngoMatshi ka-2020, kwakamsinya nje emva kokuqinisekisa ukuba imeko yayo yokuqala yosulelo lwe-COVID-19.
Ukusukela ngoko, Vietnam kuvunyelwe kuphela iinqwelomoya ezininzi zamazwe ngamazwe ngeveki kunye neengcali zangaphandle, oonozakuzaku kunye nabemi baseVietnam ababuyayo.
Abo bafikayo bamazwe ngamazwe kufuneka bahlale bodwa iintsuku ezili-14 kwiihotele ezichongiweyo okanye kwiindawo ezilawulwa ngurhulumente.
Namhlanje, abakhenkethi baseMzantsi Korea abagonywe ngokupheleleyo bavavanyelwa i-COVID-19 ekufikeni kwabo, kwaye nje ukuba iziphumo ezibi zibuyisiwe, banokuyonwabela yonke imisebenzi yabakhenkethi kwesi siqithi ngaphandle kokunyanzeliswa kokuvalelwa iintsuku ezili-14.
Iindwendwe zaseMzantsi Korea ziya kukwazi ukonwabela ngokukhululekileyo ukubona indawo, ukuthenga kunye nemisitho yokuzonwabisa efuna izatifikethi zokugonya.
Ngokutsho koMphathiswa wezeMpilo waseVietnam, bonke abasebenzi abasebenza kwiindawo zenkonzo yesiqithi kunye ne-99% ye Phu QuocAbahlali abadala bagonyelwe ngokupheleleyo intsholongwane ye-COVID-19.
Esi siqithi sikwaceba ukugonya abantwana abakwiminyaka elishumi elinesibini ukuya kwishumi elinesixhenxe kwinyanga ezayo.
Vietnam lilizwe lamva nje e-Asia ukujoyina iThailand, i-Indonesia kunye neMalaysia ekuvuleni kwakhona imida yabo kubatyeleli bangaphandle abagonywe ngokupheleleyo.
I-Thailand yaba yeyokuqala iqalile ukuvumela inani eliqingqiweyo labatyeleli bamanye amazwe abagonywe ngokupheleleyo kwisiqithi sasePhuket ngaphambi kokunabela kwezinye iindawo, kubandakanya iBangkok, ukuqala nge-1 kaNovemba.
Isiqithi sase-Indonesia sabakhenkethi sase-Bali sivulelwe abantu abafikayo kwinyanga ephelileyo ngezithintelo ezithile kubandakanya uvavanyo kunye nokuhlala yedwa ehotele iintsuku ezintlanu.
IMalaysia yavula isiqithi saseLangkawi phantsi kwenkqubo yokulinga 'COVID-19 bubble'.